lasa teo noho ny resaka fanondranana ankizy hiasa an-tsokosoko any Koweït. Tamin’ny 08 jona teo raha tsiahivina dia nisy fampodiana an-tanindrazana ireo vehivavy mpiasa tany Koweït izay natoby teny amin’ny domaine St Francois Ambatomirahavavy sy Villa vert Ambatomirahavavy. Rehefa natao ny fanadihadiana azy ireo dia fantatra fa nisy olona nikarakara ny fandehanan’izy ireo tany Koweït. Araka ny lalàna anefa dia mbola voarara ny fandehanana miasa any amin’ny firenena Arabo toa an’i Koweït, Liban, Arabie Saoudite… izy ireo izay firenena tsy nanao sonia ny fifanarahana amin’ny fiarovana ny zon’olombelona na ny « Charte Universel de droit de l’Homme » sy ny « Droit de l’Homme ». Rehefa natao ny angom-baovao dia fantatra ireo olona nandefa azy ireo tany amin’ireo firenena ireo ary niroso tamin’ny fisamborana ny mpitandro ny filaminana ka lehilahy sy vehivavy mpivady no voasambotra tamin’io daty voalaza etsy ambony io. Natao ny fanadihadiana ireto mpivady tratra ireto ka mbola hita tao amin’ny findain’izy ireo daholo ny fifampiresahana amin’ny fifanarahana amin’ireo olona mpandray ankizy hiasa any amin’ireo firenena Arabo ireo ary mbola misy fifanarahana natao farany tamin’ny volana Jona teo. Hakan’ireto mpivady ireto 1.600.000 Ar avy ireo ankizy izay kasainy alefany hiasa any ivelany ary lazainy fa hikarakarana ny antotan-taratasy izany vola izany. Mandray 500 hatramin’ny 600 Dolara kosa ny ankizy iray tonga any amin’ireo firenena ireo. Mbola mitohy ny fanadihadiana. Natolotra ny fitsarana omaly izy mivady ireto.